Ukukhanya Ukukhanya kweLouvre kuyisibani setibheli esisebenzayo esiphefumulelwe ukukhanya kwelanga kwehlobo kwamaGrikhi okudlula kalula kusuka kuma-shutter avaliwe ngeLouvres. Iqukethe amasongo angama-20, ama-cork ayi-6 kanye ayi-14 e-Plexiglas, aguqula ukuhleleka ngendlela edlalayo ukuze aguqule ukuvela, ivolumu kanye nobuhle bokugcina bokukhanya ngokuya ngokuthandwa ngabasebenzisi kanye nezidingo. Ukukhanya kudlula kokubhaliwe bese kubangela ukungafani, ngakho-ke akukho mithunzi ivele ngokwayo noma phezu kwezindawo ezizungezile. Izindandatho ezinobude obuhlukahlukene zinikeza ithuba lokuhlanganiswa okungapheli, ukwenza ngokwezifiso okuphephile nokulawulwa okuphelele kwesibani.
Kwezenhlalo Nokuzilibazisa Imigqa evundlile neqondile iyahlangana ukuze kwakhiwe igridi. Igridi ngayinye iyipulatifomu yokuxhumana, futhi ewumthombo womqondo wokuqamba we-whisky. Mayelana nokonga amandla nokuvikela imvelo, umakhi wasebenzisa izibani zokonga amandla ze-LED kulo lonke ibha. Ukuze kugcinwe ikhwalithi yomoya kubha, umklamo wamukela amafasitela ukusuka enyakatho uye eningizimu, angaqinisekisa ukuhamba komoya wemvelo.
Ukwakhiwa Kwengubo Kuluhlobo
Ukwakhiwa Kwengubo Kuluhlobo I-NS GAIA ilebuli yesimenswear yesimanjemanje evela eNew Delhi ecebile ngemiklamo eyingqayizivele namasu endwangu. Umkhiqizo ungummeli omkhulu wokukhiqizwa okwenziwe ngengqondo futhi zonke izinto ziya phezulu nge-cycling and kabusha. Ukubaluleka kwalokhu kubonakaliswa ezinsikeni zokuqamba amagama, i-'N 'ne-'S' ku-NS GAIA emele i-Natural and Sustainability. Indlela ye-NS GAIA "incane kakhulu". Ilebula idlala indima ebonakalayo ekuhambeni kancane kwezemfashini ngokuqinisekisa ukuthi umthelela wezemvelo omncane.
Lwesihlanu 16 Apreli 2021
Lwesine 15 Apreli 2021
Lwesibili 13 Apreli 2021
Ukukhanya Kwezenhlalo Nokuzilibazisa Ukwakhiwa Kwengubo Kuluhlobo Izakhiwo Ezixubile Zokwakha Ubunikazi Bebhizinisi Isibani